ITsunami yeeNcwadi: Iprowujekthi enje ngelona liza likhulu elakha labakhona | US Taalsentrum
Op 17/09/2019 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Nuutste nuus, Ons tale geplaas
“Kulo nyaka kuye kwasala iincwadi ezenza isiqingatha sebhokisi kuphela emva kweTsunami yeeNcwadi,” kutsho uGqr Vernita Beukes, ongumhlohli wakwiZiko leeLwimi nokwangumququzeleli weTsunami yeeNcwadi yeZiko yarhoqo ngonyaka, nethe yenzeka ngoLwesihlanu we-6 kweyoMsintsi (Septemba) kulo nyaka.
ITsunami yeeNcwadi le ihambisana kunye neprowujekthi ka-Emma Watson engeeNcwadi, ekhuthaza abantu ukuba bashiye iincwadi kwiindawo zoluntu ukuze abanye abantu bazifumane, bazifunde baze bashiye ezabo nabo ukuze zifunyanwe zize zifundwe ngabanye. UVernita kunye nabanye oogxa bakhe basemsebenzini sele besebenze ngeencwadi kwiZiko laBafundi iNeelsie isithuba seminyaka emithathu ilandelelana. “Sipakisha iincwadi kwakusasa kakhulu, ukuze sothuse wonke othe wangena ezokufuna ikomityi yakhe yokuqala yekofu ngencwadi”. Kunyaka ngamnye iTsunami yeeNcwadi ibanjwa kufuphi kangangoko nomhla we-8 kweyoMsintsi (Septemba), nonguMhla ongokuFunda nokuBhala weHlabathi. Umongo wayo kulo nyaka ubungokufunda nokubhala kunye nosetyenziso lweelwimi ngeelwimi.
“Ngale ndlela, sibuyekeza uluntu uluntu kwaye sibhiyozela ukubaluleka kosuku lwehlabathi,” ucacise watsho uVernita. IZiko leeLwimi likwazibandakanya kunye noluntu ngokuthi libe neeseshoni zokufundelwa kwabantwana kwiikhreshi zezikolo zaseStellenbosch, eCloetesville, Idas Valley, Jamestown, Kylemore nasePniel. Asiqinisekanga ukuba ngubani oyena uzonwabela kakhulu ezi seshoni phakathi kwabantwana kunye nalowo ubafundelayo!
Inene uchulumanco lokufunda luyosulela. Ukuba ungathanda ukuluzama, ungaqhagamshelana noVernita ukuze ubhalisele ukuba ngomnye wabo bafundela abantwana, okanye mhlawumbi ungaxhamla ekusebenzeni neLebhu yethu yokuFunda. ILebhu yokuFunda yakwiZiko leeLwimi inceda abafundi beencwadi abangabantu abadala ukuba bafunde ngokukhawulezisa nangobukrelekrele – akukhathaliseki noukuba oko kufundwayo ziingxelo zezoshishino, amanqaku ophando-nzulu okanye iiteksbhuku. Ukuze ufunde kabanzi ngale Lebhu yokuFunda, thumela i-imeyile ku-Marisca Coetzee.
US TaalsentrumArtikels in Xhosa Dialogos Nuutste nuus Ons taleITsunami yeeNcwadi: Iprowujekthi enje ngelona liza likhulu elakha labakhona